Mashandisiro Ekushandisa Algorithmic Mutengo Kuwedzeredza purofiti | Martech Zone
Chishanu, February 12, 2016 Chishanu, February 12, 2016 Douglas Karr
Saiye wega mutengesi chitaridzi, chinangwa chako ndechekuwedzera iyo purofiti pane zvako zvakavanzika zvigadzirwa. Mutengo ndicho chinhu chakakoshesa zvakanyanya kukanganisa purofiti yako - uye nekudaro zvinoda kutarisisa kwako kwakazara. Asi iwe unogona sei kuziva zvechokwadi kuti hausi mitengo yako yakavanzika zvigadzirwa zvigadzirwa zvakaderera zvakanyanya?
Unogona kunge uchisiya mari patafura yausingazive. Kana kuti pamwe urikutenga mitengo zvakanyanya uye usiri kugadzira sekutengesa kwakawanda sezvaungave iwe. Nepo yakavanzika chitupa iri zvirokwazvo nzira yekukudza bhizinesi rako mune yanhasi yemakwikwi online yekutengesa nyika, kugara pamberi pemakwikwi ndiko kiyi yekubudirira kwako.
Feedvisor yakavanzika chitaridzi mutengo wemitengo mhinduro yakagadziriswa zvakanyanya kune vega vatengesi vetabha - senge iwe. Yedu otomatiki yekuzvidzidzira-yega algorithms ichakubatsira iwe kuwedzera yako purofiti margins kune ako epachivande chitaridzi zvigadzirwa, pakupedzisira kukurumidza yako yakavanzika chitambi bhizinesi kukura.
Nei iwe uchida algorithmic mitengo yezvako zvakavanzika zvigadzirwa
Optimum purofiti - Haufanire kufungidzira mitengo yako futi. Algorithmic mitengo inobvisa njodzi yekuti iwe usiye mari patafura nekutsvaga iwo chaiwo mutengo wekuti uve nechokwadi chakanakira purofiti yega yega yezvako zvakavanzika zvigadzirwa.
Kuchengeta nguva - Haufanire kumisikidza mitengo yako futi. Kugadzirisa mitengo yezvinhu zvako zvese zvinotora nguva zvakanyanya, uye zvinogona kutora maawa ezuva rako. Kusvika ikozvino, hapana mhinduro yemutengo yakambovapo yezvakavanzika zvigadzirwa. Yedu otomatiki mhinduro inosunungura yako nguva kuti iwe ugone kutarisa pakuzadzikiswa, kutsvaga uye zvimwe zvakakosha zviitiko zvakakosha kuti uwedzere yako yakavanzika chitambi bhizinesi kukura.
Kudzora uye kugadzikana - Iwe unodzora yako yekuverenga uye musika.
Mune isingafungidzike Amazon mutengesi nzvimbo - iwe unodzora zvakakwana pamusoro pekukurumidza kana kunonoka kutengesa zvigadzirwa zvako - zvinoenderana neyako yakasarudzika bhizinesi mamiriro.
Mitengo yealgorithmic inoshanda sei?
Iko hakuna kudikanwa kwekuisa chero mitemo kana kuona chero chirevo zvigadzirwa. Yedu yekuzvidzidzira-algorithms inokanda mukati uchangopinda yako siringi mutengo uye pasi mutengo, uye zvimwe zvese zvoga zvoga.
Iwe unogona kuseta tarisiro kunze-kwe-stock zuva kana kutiudza isu kuti mangani zvinhu zvaungade kutengesa pazuva.
Target kunze-kwe-stock date - Tiudze chinangwa chako kunze-kwe-chitoro musi, uye edu algorithms anotsanangura iwo wakakwana mutengo uye wekutengesa kumhanya izvo zvinoita kuti iwe utengese kunze nezuva iro.
[bhokisi mhando = "chinyorwa" align = "aligncenter" kirasi = "" width = "90%"]muenzaniso: Kana iwe uchifanira kugamuchira dura nyowani kubva kumugadziri wako musi wekutanga wemwedzi unotevera uye uchida kubvisa yako yazvino stock panguva iyoyo, ingo tiudze zuva chairo uye tichaona kuti yako yese stock yakacheneswa pane akanakisa mutengo unogoneka, chitoro chitsva chisati chapinda. [/ bhokisi]
Target nevelocity - Ita shuwa kuti hautengese kunze nekukurumidza kana kunamatira neinononoka-inofamba yekuverenga Tiudze kuti zvinhu zvingani zvaunoda kutengesa pazuva, uye rega maalgorithms edu atarisire zvimwe zvese.
[box type = "note" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] Muenzaniso: Kudiwa kwemusika kwakwira uye iwe uri kutengesa zvimwe zvinhu kupfuura zvawanga waronga. Pamutengo uyu, iwe unotengesa kunze kwevhiki asi stock yako nyowani iri kungosvika mumavhiki maviri 'nguva. Dzivisa kurasikirwa neako peji renji nekuita shuwa kuti hautengese kunze kusvikira wapinda mune nyowani nyowani. Chengetedza kumhanya kwekutengesa kwako nekutitaurira kuti zvinhu zvingani zvaungade kutengesa zuva nezuva. [/ Bhokisi]
Kuwedzera Kwekupa Mubatsiri Zvikomborero
Sechikamu che Feedvisor yakavanzika chitupa pasuru, iwe uchagashirawo:
Our bhizinesi njere suite - inoumbwa neyakajeka madhibhodhi, mushumo wakadzika uye zviyeuchidzo zvezuva nezuva kuti zvikubatsire kuita sarudzo dzebhizinesi dzakaringana:
Iyo dashboard inopa zvese panoramic pfupiso uye yakadzika-dhiza kugona, ichikupa iwe neyakajeka ongororo yemitengo yako, kutengesa, masheya emitero uye nzvimbo yemusika.
Mishumo yedu simbisa yakafuma seti yedata iwe yaunogona kucheka uye dhaisi zvichienderana nematanho akasiyana, maererano nezvinodiwa nebhizinesi rako.
Yambiro simbisa ruzivo rwakakosha, senge kana zvinhu zvakasarudzika zvisingachabatsiri, kana zvinhu zvako zvinonyanya kutengesa zvapera, uye kana uchifanira kudzamisa zviverengero zvinofamba zvishoma nezvishoma.
A akazvipira mutengi kubudirira maneja ndiani achakutungamira mukukudza rako rakavanzika bhizimusi rechitupa. Yedu mutengi yekubudirira timu inoumbwa neAmazon nyanzvi uye vezvemari nyanzvi - saka unogona kuva nechivimbo kuti uri kurudyi maoko.
Ona izvo izvo Feedvisor inogona kuzadzikisa yako Amazon yakavanzika chitupa bhizinesi!
Kwiridzira yako Amazon Yakavanzika Label Bhizinesi
Tags: algo-mitengoalgorithmic mitengofeedvisor